''ဖူးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေက အော်ရယ်ဂျင်နယ် အခွေကိုပဲ ဝယ်ပြီးတော့ အားပေးကြတာကို ဖူး မြင်ေ - Yangon Media Group
”ဖူးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေက အော်ရယ်ဂျင်နယ် အခွေကိုပဲ ဝယ်ပြီးတော့ အားပေးကြတာကို ဖူး မြင်ေ
Myanmar Idol Season3ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို အကြံ ပေးစကားပြောပြခဲ့တဲ Myanmar Idol Season2ပြိုင်ပွဲဝင် တေးသံရှင် ဘီလီလမင်းအေး . . .
မေး- လတ်တလော ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ- အခုကတော့ ဖူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးသီချင်းဆိုထားတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နယ်ရှိုး ပွဲတွေ လိုက်ဆိုဖြစ်နေတယ်။ ဖူးရဲ့ သီချင်းခွေလေးကိုလည်း MTV အဖြစ် ပြန်ပြီး ရိုက်ကူးနေပါတယ်။
မေး- MTV ရိုက်ကူးမှုကရော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ ရိုက်ကူးနေလဲ။ သီချင်းအကုန်လုံးကို MTV ရိုက်ကူးမှာလား။
ဖြေ- MTV ကတော့ နှစ်ယောက်တွဲ ဇာတ်လမ်းပုံစံတွေထက် ဖူးတစ်ယောက်ထဲကို ပိုမြင် တွေ့ရမှာပါ။ MTV ရိုက်ကူးမှုကတော့ အခုလောလောဆယ် ဖူး စဉ်းစားထားတာကတော့ အခွေထဲကမှ ဖူးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေ၊ ပရိသတ်အားပေးမှုများတဲ့ သီချင်းတွေကိုပဲ ရွေးထုတ်ပြီးတော့ MTV ရိုက်မယ်ပေါ့နော်။ သီချင်းအကုန်လုံးကို MTV ရိုက်ကူးဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး။
မေး- အခွေအပေါ် ပရိသတ်တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေကရော ဘယ်လိုလဲ။
ဖြေ- ပရိသတ်တွေရဲ့ တုံ့ပြန့်မှုက တော်တော်ကို ကောင်းပါတယ်။ ပရိသတ် တော်တော်များများက မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကို အားပေးကြတယ်။ ဖူး အတွက် ပထမဦးဆုံး တစ်ကိုယ်တော် အခွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဖူးစိုးရိမ်ခဲ့ရတယ်။ ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူမကျမှာကို။ ဒါပေမဲ့ ဖူးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေက အော်ရယ်ဂျင်နယ် အခွေကိုပဲ ဝယ်ပြီးတော့ အားပေးကြတာကို ဖူးမြင်တွေ့ရတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖူး အရမ်းကို ဝမ်းသာရပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။
မေး- Myanmar Idol Season3သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှာရော ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ဖို့ရှိလား။
ဖြေ- အခုထိတော့ Myanmar Idol Season3အတွက် ဘာမှမသိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာပါတယ်။ ဖူး ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို အားပေးဖို့အတွက် တစ် ထောင့်တစ်နေရာကနေပြီးတော့ ပါဝင်မှာပါ။ စင်ပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေဖို့တွေ ဘာတွေကတော့ လောလောဆယ် အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။
မေး- Myanmar Idol Season3သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကလည်း Top 10 အဆင့်ထိကို ရောက်တော့မှာဆိုတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူ တစ် ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအကြံပေးချင်တာမျိုးရှိလဲ။
ဖြေ- ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတော့ ဖူး အမြဲပြောပါတယ်။ အပြင်မှာ တွေ့ရင်လည်းဖူးပြောပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ယောက်အတွက် အဓိကလိုအပ်တာက သီချင်းတွေ များများနားထောင်ပါ။ ဒီ Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲက ယှဉ်ပြိုင်နေရင်းနဲ့ အရမ်းကို ခက်ခဲတဲ့အဆင့်တွေကို အများကြီး ကျော် ဖြတ်ရတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအစ ဘယ်အပိုင်းပဲဖြစ် ဖြစ် အစစအရာရာ ဘယ်အရာကမှ လွယ်ကူတာ မရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်က လှေကားထစ် တွေ အများကြီးကို တက်နေရတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် လှေကားထစ်တိုင်းမှာ အခက်အခဲ ဆိုတာရှိပါတယ်။ ကိုယ်တက်လိုက်တဲ့ လှေကားထစ်အတွက် ကိုယ့်ဘက်က သေချာပြင်ဆင်မှုမရှိဘူး။တစ်ခုခု လွဲချော်သွားတာနဲ့ ပြုတ်ကျသွားနိုင်တာကြောင့် အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ တစ်မိနစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နှစ်မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိနစ်တိုင်းက တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အာရုံစိုက်ပြီးတော့ သေချာလုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဖူးကတော့ ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး- ဆရာမအလုပ်က လုံးဝ မလုပ်တော့တာလား။
ဖြေ- ဆရာမအလုပ်က လုံးဝမလုပ်တော့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖူး ဒီလိုင်းကို ပြန်သွားဦးမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖူးရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြီးထားတဲ့ အလုပ်ကလည်း ဆရာမအလုပ် ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပညာရေးပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ပြန်လုပ်ဖြစ်ဦးမှာပါ။
''ကျွန်မတို့က Reuse မလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှ Reduce လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပလတ်စတစ် အသ
SM အင်တာတိန်းမန့်အပေါ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တရားစွဲဆိုမှုတွင် EXO အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Tao ရှုံးနိမ့်
စားသုံးရန် မသင့်သော စားသောက်ကုန်နှင့် တရားမဝင်လောင်းကစား ဂိမ်းစက်များကို မြဝတီမြို့၌ ဖျက??
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေသခံ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံ